ဆားဘီးယားနှင့် Golden Visa အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
အကောင်းဆုံး ဆားဘီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခြင်း နှင့်ရှေ့နေများ ဆားဘီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားဆားဘီးယားနိုင်ငံသားအစီအစဉ်သည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
ဆားဘီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များမှနိုင်ငံသားသည်ဆားဘီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ ဆားဘီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနိုင်ငံသား၊ ဆားဘီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဆားဘီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ဆားဘီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခြင်း၊ , ဆားဘီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အမြဲတမ်းနိုင်ငံသား၊ ဆားဘီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှယာယီနိုင်ငံသား၊ ဆားဘီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဆားဘီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနိုင်ငံသား၊ ဆားဘီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဆားဘီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်မှု၊ ဆားဘီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဆားဘီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဆားဘီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ဆားဘီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ဆားဘီးယားရှိစီးပွားရေးနေထိုင်မှုအစီအစဉ်များ၊ ဆားဘီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဆားဘီးယားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ia၊ ဆားဘီးယားနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဆားဘီးယားတွင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၂ ခု၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့်ဆားဘီးယားနိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဆားဘီးယားနိုင်ငံ၏သံတမန်ဆိုင်ရာဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဆားဘီးယားနိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဆားဘီးယားနိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ ဆားဘီးယားရှိရွှေဗီဇာ၊ ဆားဘီးယားရှိရွှေဗီဇာ၊ ဆားဘီးယားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ ဆားဘီးယားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဆားဘီးယားရှိဒုတိယဗီဇာအစီအစဉ်, ဆားဘီးယားရှိဒုတိယဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဆားဘီးယားရှိရွှေဗီဇာ၊ နိုင်ငံသားနှင့်ဆားဘီးယားရှိရွှေဗီဇာ နေထိုင်ခွင့်နှင့်ဆားဘီးယားရှိရွှေဗီဇာ၊ ဆားဘီးယားရှိရွှေဗီဇာနိုင်ငံသား၊ ဆားဘီးယားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဆားဘီးယားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်။
နောက်ထပ်ထောက်ခံမှုဖြင့်ဆားဘီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်“ ၁ ချက်ဖြေရှင်းချက်” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်အတွက်ဆားဘီးယားနိုင်ငံ၏အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - 250,000
အထူးသဖြင့်နိုင်ငံရပ်ခြားမှလာရောက်လည်ပတ်သူများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရေးနှင့်စပ်လျဉ်း။ အသိအမှတ်ပြုခံထားရသည့်ဆားဘီးယား၏ရင်းနှီးဖော်ရွေမှု၊ ရိုးသားမှုနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောသဘောထားတို့သည်ရှေးခေတ်ကတည်းကသိခဲ့ပြီးယခုယေဘူယျအားဖြင့်လည်းရိပ်မိနေသည်။ စည်းဝေးကြီးနှင့်ဓလေ့ထုံးတမ်းများအရဆားဘီတိုင်းသည်လျောက်ပတ်သောအိမ်ရှင်ဖြစ်သင့်ပြီး every ည့်သည်တိုင်းသည်နိုင်ငံ၏မြင့်မားသောကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုနှင့်ကောင်းမွန်သောအထင်အမြင်များဖြင့်ထွက်ခွာသင့်သည်။ ဆားဘီးယားသို့အလည်အပတ်ခရီးလာသည့်အပန်းဖြေခရီးသွားများအပန်းဖြေခရီးသွားအများစုသည်ပြန်လည်လည်ပတ်ရန် ၀ မ်းသာကြပြီးအချို့မှာမူဤတွင်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ပြင်ပလူတစ်ယောက်ဒီနေရာကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါဆားဘီးယားလူမျိုးတွေကယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့အမြဲတမ်းမေးလေ့ရှိပါတယ် - ဒီပြင်ပလူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ၊ သူ / သူမရဲ့တိုင်းပြည်ကိုစွန့်ခွာပြီးဆားဘီးယားကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ဘာကြောင့်သူ့ကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တာလဲ။ ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများတွင်လူတစ် ဦး ချင်းစီသည်များသောအားဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနေထိုင်မှုကိုခံစားကြရသည်ဟုဆာဗေးလူမျိုးများကယူဆကြသောအဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်ဤမေးမြန်းစုံစမ်းမှုများသည်အများအားဖြင့်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဤနေရာတွင်ပြောင်းရွှေ့ရန်ရွေးချယ်သောပြင်ပရှိသူများ - ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်ခင်ဖွယ်ကောင်းသောသဘောထား၊ ယေဘုယျအားဖြင့်အချိန်များစွာရရန်၊ ပျော်စရာများစွာနှင့်ဘဝကိုတန်ဖိုးထားရန်မည်သို့တွက်ချက်သည်ကိုယေဘုယျအားဖြင့်တွက်ဆနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့ထဲမှအများစုသည်ဆားဘီးယားရှိလူနေမှုစရိတ်သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမတူကွဲပြားသောနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနောက်ဥရောပနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နိမ့်ကျသည်ကိုတွေ့ရသည်။ များသောအားဖြင့်တော့ဆားဘီးယားကိုလာတဲ့အပြင်လူတွေက Belgrade မှာနေဖို့ရွေးချယ်ကြတယ်၊ အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကြောင့်တခြားဆားဘီးယားမြို့ပြဒေသတွေမှာနေထိုင်ဖို့ရွေးချယ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။
ဆားဘီးယားသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၏နောက်ကွယ်မှ ပိုမို၍ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်နှင့်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောရှင်းပြချက်များအနက်တစ်ခုမှာနှစ်ခြိုက်မှုကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ ဆားဗီးယားအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများသည်အထူးသဖြင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိကြောင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံလက်ခံထားသောနည်းလမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့လျစ်လျူမရှုသင့်ပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပန်းဖြေခရီးထွက်သူများ (သို့) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမည်သည့်နေရာမှမထွက်ခွာဘဲပြင်ပမှလာသူများသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်နှင့်ဤနေရာတွင်သူတို့၏ကံကြမ္မာကိုကြိုးပမ်းရန်အကြောင်းများကြောင့်ဆားဘီးယားတွင်နေထိုင်ရန်ရွေးချယ်လိုက်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်ဆားဘီးယား၏မြို့တော်တွင်နေထိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်သူများအတွက်အကြီးမားဆုံးသော ဦး စားပေးအနေအထားမှာယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းကို“ ၂၄ နာရီနှင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်” သောမြို့ဟုလူသိများသည်။ ဒါ့အပြင်ဘားနဲ့ကလပ်အမျိုးမျိုးကို ၂၄ နာရီလွှဲပြောင်းပေးတာကိုပဲဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင်လက်လီဆိုင်များနှင့်အဓိကကုန်ပစ္စည်းများစတဲ့အခြားအကူအညီပေးရေးလေ့ကျင့်ခန်းများစွာဟာမဆုတ်မနစ်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် - ဘယ်လ်ဂရာနိုင်ငံ၊ ဆားဘီးယားနိုင်ငံ၊ ဘဲလ်ဂရက်မြို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အလို့ငှါ!
သင်ကဆားဘီးယားရှိအခြားပိုမိုကျိုးနွံသောမြို့မှဘဲဂလူးဂ်သို့လာသူတစ်စုံတစ်ယောက်အားသင်တောင်းဆိုလျှင်၊ သူသည်သူမပြောပြသည်မှာဘဲဂရိတ်တွင်နေထိုင်ခြင်းသည်အလျင်အမြန်ဖြစ်ပြီးယခုခေတ်တွင်ပြtroublနာကြီးဖြစ်ပြီး၊ အဓိကပြissueနာမှာအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်သည် နှင့်သင်တစ် ဦး မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ဆိုင်သောချွတ်အခွင့်အလမ်းအပေါ်ထွက်ခွာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အခြားလူများအတွက်မူဘီဂရိတ်တွင်နေထိုင်သောကုန်ကျစရိတ်များသည်မြင့်မားပြီး၎င်းတို့ကြီးပြင်းရာနေရာများတွင်ကုန်ကျစရိတ်များကိုလုံးဝလျှော့ချရန်အသုံးပြုသည်။ Belgrade တွင်နေထိုင်ခြင်းသည်အခြားဆားဘီးယားမြို့ပြဒေသများရှိအခြေခံပစ္စည်းများ၏ပုံမှန်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပိုမို၍ အကုန်အကျများသော်လည်း၊ Belgrade တွင်နေထိုင်ခြင်းသည် ပို၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိသည့်ဘဝအားလုံးအတွက်ပျော်စရာ၊ လူမှုရေးနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းများအတွက်ပိုမိုသာလွန်သောတံခါးဖွင့်နိုင်သည်။ ပိုကောင်းတဲ့ကျောင်းပညာရေးနှင့်သိသာထင်ရှား - အလုပ်အတွက်ပိုပြီးပွင့်လင်းတံခါးကို။
ဆားဘီးယားသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်ရွေးချယ်သူပြင်ပအခြေခံပစ္စည်းများအတွက်ပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဘာပြောသနည်း။
ဥရောပမြို့ပြဒေသများမှဆားဘီးယားသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်ရွေးချယ်သောမရင်းနှီးသောနေထိုင်သူများအတွက်၊ ဆားဘီးယားရှိအခြေခံပစ္စည်းများအတွက်ပုံမှန်ကုန်ကျစရိတ်မှာယေဘုယျအားဖြင့်နည်းပါးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အနောက်နိုင်ငံများရှိနေ့စဉ်သက်သာခြင်းများကိုမျှော်လင့်ခြင်းသည်ဤနေရာတွင်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ခေါင်မိုးများငှားရမ်းခြင်းမပြုသူများသို့မဟုတ်ဘဏ်များတွင်ကြီးမားသောချေးငွေများမပါရှိသူများသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောတာ ၀ န် ၀ တ္တရားများအတွက်အထူး ဦး စားပေးအနေအထားရှိသည်မှာအဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုငှားရမ်းခသည် Belgrade ဆားဘီးယားနိုင်ငံ၏နေ့စဉ်ကုန်ကျစရိတ်များအနက်အကြီးမားဆုံးဖြစ်သည်။
ယေဘုယျစည်းမျဉ်းတစ်ခုအနေနှင့်သင်သည်ရက်ရောစွာလျော်ကြေးပေးရသောအလုပ်တစ်ခုကိုမည်သို့ရနိုင်မည်ကိုတွက်ထုတ်ပြီးတန်ဖိုးမဲ့သောပစ္စည်းများကိုငွေအလွန်အကျွံမသုံးစွဲပါကဘယ်ဂရိတ်ရှိအခြေခံပစ္စည်းများ၏ပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်သည်အလွန်ထိုက်တန်သည်။ ထိုနည်းတူစွာကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်အတိုင်းအတာကိုသာစဉ်းစားနေလျှင်၊ ဘဲဂရိတ်တွင်နေထိုင်နိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများကိုမစဉ်းစားဘဲဘဲဂရိတ်တွင်နေထိုင်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်သည်အခြားနေရာများတွင်နေထိုင်ခြင်းထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်ဟုယူဆရန်အလွန်လွယ်ကူသည် ဆားဘီးယားမြို့ပြဒေသများ။ ဥရောပသိသာထင်ရှားသောမြို့ပြဒေသများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လူနေမှုကုန်ကျစရိတ်သည်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းသို့မဟုတ် ပို၍ နိမ့်သည်။ ဆားဘီးယားလူမျိုးများက“ အရာအားလုံးသည်၎င်း၏ ဦး စားပေးမှုများနှင့်အတားအဆီးများရှိသည်!” ဟုဆိုထားသည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ အပန်းဖြေဂိမ်းများ၊ တစ် ဦး ချင်းသန့်ရှင်းမှု၊ အိမ်အသုံးအဆောင်များ၊ အချိုရည်များ၊ အ ၀ တ်အစားများ၊ အစားအစာများအပါအ ၀ င်ထူးခြားသောအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေါင်း ၁၆၀ ၏ကုန်ကျစရိတ် ၄၀၀ ကျော်ကိုဆန်းစစ်ရန်စဉ်းစားထားသောမယုံနိုင်လောက်အောင်ကျော်ကြားသော“ ဘဏ္ “ာရေး ကျွမ်းကျင်သူ” ဒိုင်ယာရီမှစုစည်းထားသည့်နှုန်းထားအရ၊ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများနှင့်အုပ်ချုပ်မှုမတူညီသောစင်္ကာပူသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကုန်အကျအများဆုံးမြို့ဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူဘဲလ်ဂရက်ဒ်သည်မြို့ပြအသိုင်းအဝိုင်းများထဲတွင်နေရာအများစုကိုမကြာသေးမီ နှစ်မှစ၍ ပထမဆုံးစာရင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ကုန်ကျစရိတ်အများဆုံးသောမြို့ပြအသိုင်းအဝိုင်း ၁၀ ခုတွင်ပါရီ၊ ဇူးရစ်၊ ဂျီနီဗာ၊ အော့စလို၊ ဟောင်ကောင်၊ ကိုပင်ဟေဂင်၊ ဆိုးလ်၊ ဆစ်ဒနီနှင့်တဲလ်အဗစ်တို့ပါဝင်သည် အနိမ့်ဆုံးလူနေမှုကုန်ကျစရိတ်သည်ဒမတ်စကတ်၊ အဲလက်စ်၊ ကရာကက်စ်၊ အယ်လ်ဂျီးရီးယား၊ ဘူခါရက်စ်၊ ဘန်ဂလို၊ ဂို့စ်၊ ချန်နိုင်း၊ ကရာချိနှင့်နယူးဒေလီတို့တွင်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ဘဲဂရိတ်တွင်နေထိုင်ခြင်းနှင့်ဆားဘီးယားတို့၏နေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ်များသည်တစ် ဦး ချင်းအနေနှင့်ပိုမိုစိတ် ၀ င်စားမှုများရှိပြီးအစိတ်အပိုင်းများစွာအပေါ်တွင်မှီခိုနေသောအိမ်အတွေ့အကြုံနှင့်နီးကပ်မှုအပေါ်မူတည်သည်။ အမှန်တကယ်တွင်သူတို့သည်စာမေးပွဲတွင်အကြီးမားဆုံးမဟုတ်သကဲ့သို့အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ အခြားကမ္ဘာသို့မဟုတ်ဥရောပမြို့ပြအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူ!
ဆားဘီးယားသည်နေထိုင်ရန်လျောက်ပတ်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်နေပါကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်နေ့စဉ်ကုန်ကျစရိတ်၏အတိုင်းအတာအပေါ်တွင်သာသက်ရောက်သည်မဟုတ်ပါ။ ဥပမာ၊ တစ်စုံတစ် ဦး ကလူတစ် ဦး အားအရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ပေးခြင်းနှင့်သူ၏စိတ်ဓာတ်ကိုတားဆီးသည့်အရာ၊ ဆားဘီးယားသည်နေထိုင်ရန်လျောက်ပတ်သောနေရာတစ်ခုဟုတ်မဟုတ်ကိုသင်မေးမြန်းလိုပါကအရာအားလုံးသည်သင်၏ဆန္ဒများ၊ လိုအပ်ချက်များ၊ ဆန္ဒများ၊ အစီအစဉ်များနှင့်စွမ်းရည်များပေါ်တွင်မှီခိုနေကြောင်းသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြောပြလိမ့်မည်။ ရှည်လျားသောကာလများအတွက်, ဆားဘီးယားနှင့်ဆားဘီးယားမှနည်းလမ်းနှစ်ခုအတွက်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုမြောက်မြားစွာရှိခဲ့သည်။ လူအနည်းငယ်သည်ဆားဘီးယားတွင်သူတို့၏ချမ်းသာမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးအချို့ကမူအခြားနေရာများတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သေချာသည်မှာသေချာသည် - အကယ်၍ သင်သည်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနှင့်လူတစ် ဦး ချင်းကိုအလျင်အမြန်အသိအမှတ်ပြုပြီးသင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ပါစေ၊ သင်မည်သည့်နေရာမှလာသည်ကိုကြိုဆိုလိမ့်မည်ဆိုလျှင်ထိုအချိန်တွင်ဆားဘီးယားပင်ဖြစ်သည်။ ကြိုဆိုပါတယ်။
အတွက်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများ အတွက်ရွှေဗီဇာ ဆားဘီးယား
သဘာဝမှတဆင့်မပြတ်မတောက်နေထိုင်ရာ3နှစ်ပြီးနောက်
လှူဒါန်းခြင်း / အိမ်ခြံမြေ / စီးပွားရေး
ဆားဘီးယားသည်တောင်ဘက်တွင်နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းများရှိသည့်မြောက်ဘက်ကုန်းပြင်မြင့်များနှင့်တောင်တန်းများကြောင့်လူသိများသောမြို့တော်ဘီဂရိတ်နှင့်အတူအရှေ့တောင်ဥရောပဘော်လ်ကန်ကျွန်းဆွယ်တွင်တည်ရှိသည်။ ဆားဘီးယားသည်အရှေ့နှင့်ဥရောပအကြားကွဲပြားခြားနားသောအနေအထားကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ ၎င်း၏ရှည်လျားသောနှင့်ကြွယ်ဝသောသမိုင်းစဉ်အတွင်းကအမြဲလူမျိုးနှင့်ဘာသာတရား၏မတူကွဲပြားထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ဆားဗီးယားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူများသည်စပိန်မှဆိုက်ဘေးရီးယားသို့ဗီဇာကင်းလွတ်စွာသွားလာနိုင်သည့်အပြင်ယနေ့တွင်နိုင်ငံများစွာနှင့်အထူးသမိုင်းဝင်ဆက်နွယ်မှုများနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုထင်ရှားစေသည်။ ထို့အပြင်ဆားဘီးယားသည်အီးယူနှင့်ရုရှားနှစ်နိုင်ငံလုံးနှင့်အကျိုးရှိသောကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်များကိုကိုင်တွယ်ရန်အားသာချက်ရှိသည်။
ဆားဘီးယားကမ်းလှမ်းသောနိုင်ငံသားဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်သည်အသစ်စက်စက်စတင်နေပြီဖြစ်သော်လည်းဥရောပနိုင်ငံသားရရှိရေးအတွက်အမြန်ဆုံးနှင့်တတ်နိုင်သမျှအသက်သာဆုံးအစီအစဉ်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခင်စီးပွားရေးအတွေ့အကြုံသို့မဟုတ်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုများကိုတင်ပြရန်မလိုအပ်ပါ။ ။
သင်၏ဆားဘီးယားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပေးအပ်မှုအကျိုးကျေးဇူးများသည်အသက် ၂၅ နှစ်အောက်ကလေးများနှင့် ၆၅ နှစ်အထက်မိဘများအပါအ ၀ င်မှီခိုနေသောမိသားစု ၀ င်များသို့တိုးမြှင့်ထားသည်။
ပရိုဂရမ်၏လုပ်ငန်းစဉ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၃ လခန့်သာရှိပြီးယခင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွေ့အကြုံများကိုပြသရန်လိုအပ်သည်။ ဘာသာစကားစစ်ဆေးရန်မလိုအပ်ပါ။ လျှောက်လွှာကိုသင်အင်တာဗျူးလုပ်စရာမလိုပဲထုတ်ပေးနိုင်သည်။
လောလောဆယ်ဆားဘီးယားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဆားဘီးယားနိုင်ငံသားရရှိရန်အခြားနည်းလမ်းသုံးခုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ပထမတစ်ခုမှာအနည်းဆုံးယူရို ၂၅၀,၀၀၀ အနည်းဆုံးပြန်အမ်းရန်မလိုအပ်သည့်လှူဒါန်းမှုလိုအပ်သည်။ သို့မဟုတ်ပါကအနည်းဆုံးယူရို ၂၅၀,၀၀၀ ဖြင့်ဆားဘီးယားရှိအိမ်ခြံမြေများကို ၀ ယ်ယူရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနည်းဆုံးယူရို ၅၀၀,၀၀၀ နှင့်အနည်းဆုံးဆားဘီးယားနိုင်ငံသား ၄ ယောက်ကိုအလုပ်ခန့်နိုင်သည်။ မည်သည့်အခြေအနေမျိုး၌မဆိုသင်သည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုအနည်းဆုံး ၅ နှစ်အထိဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်မျှော်လင့်ကြောင်းသိထားသည်။
ထို့အပြင်လျှောက်ထားသူများအနေဖြင့်လျှောက်ထားသူများအားပေးဆောင်ရမည့်ငွေပမာဏမှာယူရို ၇၅၀၀ နှင့်အစိုးရငွေ ၂၅၀၀၀ (ယူရို ၅၀,၀၀၀) အတွက်လုံလောက်သောလုံ့လဝီရိယရှိသောအခကြေးငွေများရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နိုင်ငံသားအဖြစ် ဆားဘီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကသည် နှင့် နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ ဆားဘီးယားအတွက် ဆားဘီးယားရှိဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကိုဆားဘီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုအထောက်အပံ့၊ ဆားဘီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံမှထောက်ပံ့ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဆားဘီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ဆားဘီးယားမှ Golden Visa ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ သို့မဟုတ်ဆားဘီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကိုသာကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။ ဆားဘီးယားမှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းကူညီပေးပါသည်။ ဆားဘီးယားသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ ဆားဘီးယားရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်ငွေရေးကြေးရေးစီမံကိန်းနှင့်အခြားများစွာပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ဆောင်မှုများအားဖြင့်နိုင်ငံသား ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့်ဆားဘီးယားအဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ ဆားဘီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ၊ ဆားဘီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင်သောနိုင်ငံသား၊ ဆားဘီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကတတ်နိုင်သောနိုင်ငံသားနှင့်ဆားဘီးယားအတွက်တတ်နိုင်သောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီများ
ဆားဘီးယားမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
ဆားဘီးယားရှိနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာ။
ဆားဘီးယားမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
ဆားဘီးယားမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
ဆားဘီးယားရှိနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
ဆားဘီးယားမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
ဆားဘီးယားမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
ဆားဘီးယားမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအထိစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆားဘီးယားရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်ဆားဘီးယားတွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအပေါ်ကောင်းမွန်သောအကျိုးအမြတ်ရရှိသင့်သည်ဟူသောရှုထောင့်နှင့်အတူပံ့ပိုးမှုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဆားဘီးယားရှိအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီအနည်းငယ်နှင့်အတူအဆင်ပြေချောမွေ့ပြီးကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးဆားဘီးယားရှိကောင်းသောနေရာများတွင်အကောင်းဆုံးအမြတ်အစွန်းများရရှိနေသည်။
သိရန်လိုအပ် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဆားဘီးယားနိုင်ငံသား
ဆားဘီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေကနိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်ဆားဘီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏အောင်မြင်သောနိုင်ငံသားအတွက်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ ဆားဘီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်မည်သည့်အကြံပြုချက်များကို အခြေခံ၍ ဆားဘီးယားမှဆားဘီးယားသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်လိမ့်မည်
ဆားဘီးယားနိုင်ငံသားဖြစ်ရန်နှင့်ဖောက်သည်များအားဆားဘီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားပြုမှုကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာကိုပြင်ဆင်ရန်နှင့်ငြင်းဆန်ခြင်း၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်ကန ဦး အစီအစဉ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဆောင်ရွက်ပါသည်။
ဆားဘီးယားအတွက်လုံ့လဝီရိယရှိရှိလေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
ဆားဘီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုရှေ့ဆက်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များနှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆားဘီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ဆားဘီးယားရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ဆားဘီးယားများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ဆားဘီးယားမှသို့မဟုတ်လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်ကုန်သည်များသို့ကုန်သည်များ (သို့) ဖြန့်ဖြူးသူများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ဆားဘီးယားများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် ဆားဘီးယားတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်ဆားဘီးယားတွင်ဖြစ်စေ၊ သို့ဖြစ်စေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကိုစက်မှုစောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ဆားဘီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံသည် ဆားဘီးယားရှိမည်သည့်တရားမဝင်သောသို့မဟုတ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအတွက်မဆိုကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် ဆားဘီးယားအတွက် ဆားဘီးယားရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ဆားဘီးယားများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ဆားဘီးယားရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ကုန်သွယ်ရေး၊ ဆားဘီးယားတွင်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့ပြုလုပ်သောဆားဘီးယားအတွက်တစ် ဦး ချင်းစီကိုဆားဘီးယားအတွက်ထောက်ပံ့မှုကိုမရပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ဆားဘီးယားအတွက် တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု ဆားဘီးယားအတွက် ဆားဘီးယားရှိဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ဆားဘီးယား ဆားဘီးယားရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသား ဆားဘီးယားအတွက်ရှေ့ရပျ ဆားဘီးယားရှိမူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းလုပ်ငန်းကိုမထောက်ပံ့ပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်ဆားဘီးယားနှင့်၎င်းတို့၏ KYC အတွက်ဖောက်သည်များအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုတိကျမှန်ကန်စေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း၊ ဆားဘီးယားရှိအာဏာပိုင်များမှလျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုရန်အတွက်ငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နိုင်ငံသားအဖြစ် ဆားဘီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
ဆားဘီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားသည်ဆားဘီးယားအတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်နိုင်သောနှုန်းဖြင့်ဈေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးသည်။
ဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကိုဆားဘီးယားအတွက်ထောက်ပံ့ပေးသည့်ဆားဘီးယားနိုင်ငံတွင် Dual နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည်။
သင်၏ဆားဘီးယားနိုင်ငံသားဖြစ်မှုမတိုင်မီနှင့်ခွင့်ပြုချက်ရပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်ဆားဘီးယားအတွက်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထောက်အပံ့အတွက်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်
ဆားဘီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
ဆားဘီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်ရန်မိသားစု ၀ င်များနှင့် ၄ င်းတို့၏အသက်အပါအဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုဖြည့်စွက်ပါ။ ဆားဗီးယားအတွက်ဖောက်သည်အမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ ဆားဘီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့်အခြားအခကြေးငွေများအရနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ ဆားဘီးယားအတွက်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆားဘီးယားတွင်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုသာစာရင်းပြုစုထားသည်။
သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူဆားဘီးယားသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဆားဘီးယားအတွက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေနှင့်၊ ဆားဘီးယားတွင်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်သင်လိုအပ်မည့်အချိန်နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းအပြင်ဆားဘီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆားဘီးယားတွင်စီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလည်းပေးသည်။ ၎င်းကိုဆားဘီးယားအတွက်အခြားအတိုင်ပင်ခံများကကျွန်ုပ်တို့အားဆားဘီးယားနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုအတွက်တစ်နေရာတည်းဖြစ်စေသည့်ဆိုင်တစ်ခုအောက်တွင်သင်ရှာမတွေ့နိုင်ပါ။
ဆားဘီးယားအတွက်မိသားစုများ၊ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့သည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ ဆားဘီးယားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် သို့မဟုတ် Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (ဆားဘီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ ဈေးချိုသည်။ )
ဆားဘီးယားသို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချမည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် ဆားဘီးယားရှိပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဏ်အကောင့် ဆားဘီးယားရှိကုမ္ပဏီဘဏ်အကောင့်များနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Inca သင်, ဆားဘီးယားအတွက်တိုင်ပင်လိုအပ်ပါတယ် ဆားဘီးယားအတွက်ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် ဆားဘီးယားရှိရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ဆားဘီးယားကိုသင်စီစဉ်မယ်ဆိုရင် ဆားဘီးယားရှိလက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန် ဆားဘီးယားအတွက်ချက်ချင်းစတင်ဘို့။
ဆားဘီးယားရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ ဆားဘီးယားရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် ဆားဘီးယားအတွက်နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဆားဘီးယားအတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
ဆားဘီးယားအတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ ဆားဘီးယားအတွက် virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းအင်း, ဆားဘီးယားအတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
ဆားဘီးယားရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
ဆားဘီးယားရှိ setup ကိုစီးပွားရေး
နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးနောက်ဆားဘီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်၊ အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဆားဘီးယား.
ဆားဗီးယားတွင်ဖော်ပြထားသော IT ဖြေရှင်းနည်းများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်
ဆားဘီးယားရှိ Web Design
ဆားဘီးယားရှိ Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဆားဘီးယားရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဆားဘီးယားရှိ App Development
ဆားဘီးယားတွင် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆားဘီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြေရှာမှုဖြင့်တရားဝင်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုပံ့ပိုးပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဆားဘီးယားအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ ဆားဘီးယားအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ဆားဘီးယားတွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ ဆားဘီးယားတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းချက်။ ဆားဘီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်လိုင်း၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်ဆားဘီးယားတွင်နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်ဆားဘီးယားနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ သင်သည်ဆားဘီးယားအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ထားပါကဆားဘီးယားပိုင်နက်တွင်အသုံးပြုရန်သင်၏ရှေ့နေအားတရားဝင်တရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်အက်ဆက်ကိုအက်ရ်ှလေလားသို့မဟုတ်ဆားဗီးယားကောင်စစ်ဝန်ရုံးကတရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - ဆားဘီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်ဆားဗီးယားနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဆားဘီးယားနိုင်ငံ၏နေထိုင်မှုကို“ ဆားဘီးယားနိုင်ငံ၏နေထိုင်မှုကိုရယူခြင်း” ဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဆားဘီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဆားဘီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း။ ဆားဘီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ ဆားဘီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ဆားဘီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများမှအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်နှင့်ဆားဘီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ဆားဘီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ဆားဘီးယား၌တည်၏။
ဆားဘီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့် ဆားဘီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခွင့် ဆားဘီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏နေထိုင်မှု | ဆားဘီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကနေထိုင်ခွင့် ဆားဘီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကနေထိုင်မှု
ဆားဘီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဆားဘီးယားရှိစီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်ဆားဗီးယားနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဆားဘီးယားနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဆားဘီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဆားဘီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နိုင်ငံသားခံယူခြင်း၊ ဆားဘီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ဆားဘီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ဆားဘီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများမှနိုင်ငံသားအကောင်းဆုံးနှင့်ဆားဘီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများမှအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားခြင်း ဆားဘီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များနှင့်ဆားဘီးယားရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီများကအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆားဗီးယား | ဆားဘီးယားရှိလူကြိုက်များသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ဆားဘီးယားရှိစျေးချိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ဆားဘီးယားရှိစျေးချိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ဆားဘီးယားအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံ | ဆားဘီးယားအတွက်တတ်နိုင်သောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
ဆားဘီးယားနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုဆားဘီးယားနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အိမ်ခြံမြေ၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်ဖြင့်တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းစသည်တို့ကိုဆားဘီးယားသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်း၊ ဆားဘီးယားအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဆားဘီးယားရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ ဆားဘီးယားနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်ဆားဘီးယားအတွက်အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အကြံပေးများ၊ ဆားဘီးယားတွင်အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဆားဘီးယားရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်။
ဆားဘီးယားအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု ဆားဘီးယားရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ ဆားဘီးယားရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ဆားဘီးယားရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ဆားဘီးယားအတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေစသည်တို့ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်ဆားဘီးယားစီးပွားရေးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဆားဘီးယားနိုင်ငံ၏နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရယူခြင်းဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဆားဘီးယားသို့ရွှေဗီဇာလျှောက်ထားခြင်း၊ ဆားဘီးယားအတွက်ထောက်ပံ့ထားသောရွှေဗီဇာအစီအစဉ်။ ဆားဘီးယားအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ ဆားဘီးယားရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်ဆားဘီးယားအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများ၊ ဆားဘီးယားရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဆားဘီးယားရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်ဆားဘီးယားအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ
ဆားဘီးယားအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | ဆားဘီးယားရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ ဆားဘီးယားရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ဆားဘီးယားရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ဆားဘီးယားအတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
ဆားဘီးယားနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ ၂၅၀,၀၀၀ ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်ဆားဘီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်ဆားဘီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်မြင့်မားသောအမြတ်အစွန်းတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဆားဘီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုသာပေးဆောင်ရပြီး၊
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအာရှမှဆားဘီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ နိုင်ငံမှအာဖရိကမှဆားဗီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဥရောပမှဆားဘီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ တောင်အမေရိကမှဆားဗီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နိုင်ငံသားပြုခြင်းကိုမည်သည့်နိုင်ငံသားမဆိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မလေးရှားမှဆားဘီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှဆားဘီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အင်ဒိုနီးရှားမှဆားဘီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ သီရိလင်္ကာမှဆားဘီးယားမှနိုင်ငံသားပြုမှု၊ နီပေါမှဆားဘီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ အိန္ဒိယမှဆားဗီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား ယူအေအီးမှဆားဘီးယားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
link ကိုမှ ဆားဘီးယားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန , ဆားဘီးယားရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရှိန်မြှင့်များအတွက်မူဝါဒများရေးဆွဲတာဝန်ရှိသည်